Ara-drariny Ve Ny Fanomezan-doka Sarina Lehilahy Haitiana Mpifindramonina Mandro Nalaina Sary Tao Brezila? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2015 5:44 GMT
Ny fitombon'ny fahatongavan'ireo mpifindramonina ao São Paulo, foibe fandraisana feno olona.
Sary: Laura Daudén/ Conectas.Org/Fotos Públicas (29/04/2014)
Sokajiana ho iray amin'ireo fankasitrahana lehibe indrindra eo amin'ny asa fanaovan-gazety Breziliana ny Amboara Vladimir Herzog. Notontosaina tamin'ny fanohanana avy amin'ny Firenena Mikambana, anarana mpanao gazety novonoin'ny didy jadona Breziliana tamin'ny 1975. Saingy tamin'ity taona ity, niteraka adihevitra ny iray tamin'ireo voafantina, ary nampanontany ny andraikitra ara-tsosialin'ny asa fanaovan-gazety.
Ny sangan'asa nahazo loka tamin'ny sokajy sary dia avy amin'ilay mpakasary Ronny Santo, sarina lehilahy Haitiana mandro tampoka ao amin'ny faritry ny Missão Paz (Misionan'ny Fandriampahalemana), fikambanan'ny fiangonana katolika ao São Paulo, tamin'ny volana Mey 2015. Navoaka tamin'ny ny gazety Agora sy Folha de S. Paulo, gazety roa anisan'ny lehibe indrindra ao Brezila, niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpifindramonina sy fikambanana misahana resaka mpifindramonina ny sary.
Sarin'ilay lehilahy Haitiana nalaina tamin'ny volana Mey tao amin'ny efitra fandroana ao Missão Paz, toerana feno mpifindramonina tamin'izany fotoana. Nahazo ny loka Vladimir Herzog momba ny famontsoran-keloka sy ny zon'olombelona ny sary tamin'ny volana Oktobra. Sary: ARFOC-SP/Divulgação
Tsy ela taorian'ny nivoahan'ny sary, namoaka taratasy miampanga izay heveriny ho “asa fanaovan-gazety manaitaitra” ny Missão Paz, tarihin'ny mpisorona Italiana Paolo Parise:
Manararaotra ny toe-javatra ny tatitra sasany mba hitsabahana amin'ny fiainana manokan'ny hafa, mampiseho ireo mpifindramonina tsy nahazoana alalana avy amin'izy ireo, ka manjary lasa vokatra ara-barotra amin ‘ny fomba tsy manaja ny maha-olona tanteraka ny sarin'ireo olona ireo (mpifindramonina). Ny tanjon'ny fampahalalam-baovao ao anatin'izany krizy izany dia ny hanery ny fanjakana mba handray fepetra, fa tsy hanelingelina ireo izay mila fanampiana indrindra.
Nalaina tao anatin'ny toe-javatra manokana ny sary: tamin'izany fotoana izany, mpifindramonina avy amin'ny firenena samy hafa – Haitiana, amin'ny ankapobeny – no nivantana tao Brezila tamin'ny alalan'ny fanjakan'i Acre, ao amin'ny sisintany ifandraisana amin'i Però sy Bolivia. Tsy ampy fotodrafitrasa sahaza sy noho ny fanampiana kely avy amin'ny governemanta federaly, nalefan'ny governemantan'i Acre tao anaty fiara fitateram-bahoaka hafa ireo mpifindramonina mba hamonjy fanjakana hafa, tahaka an'i São Paulo.
Nitolona ireo vondrona fiarahamonim-pirenena manampy ny mpifindramonina ao São Paulo mba hahazo fahafaham-po ny fangatahana . Nilaina mihitsy ny Missão Paz mba hampiantrano ireo mpifindramonina nomena kidoro ilafihana ao amin'ny efitrano malalaka iray noho ny tsy fahampian'ny toerana.
Manoloana ny fanambarana ny sary ho anisan'ireo mpandresy tamin'ny Lokan'ny Famotsorankeloka sy ny Zon'olombelona Vladimir Herzog tamin'ity taona ity, dia nangataka tamin'ny komity mpikarakara ny loka ny Missão Paz sy ny Fikambanana Haitiana ao São Paulo mba hihevitra indray ny safidin'izy ireo.
Tamin'ny taratasy misokatra nalefa tany amin'ny komity, nilaza ny Fikambanana Haitiana hoe:
Nangataka tamin'ilay mpanao gazety sy mpaka sary izahay ‘raha tian'izy ireo hisy olona hiditra ao an-tranon'izy ireo ary maka sary azy ireo eo am-pidiovana.’ Niresaka tamin'ireo Haitiana tao amin'ny efitranom-piangonana izahay raha nitifitra ny sary ilay mpaka sary. Tsy nangataka alalana. Tsy mahalala fomba tanteraka, niditra tao amin'ny trano fidiovana izy ary naka ny sary. Sadaikatra tanteraka ilay lehilahy Haitiana (nalaina sary) nandao an'i São Paulo nony farany. Malahelo izahay amin'ny maha-fikambanana sy amin'ny maha-Haitiana anay..
Tao anatin'ny taratasy ihany, nilaza ny Fikambanana Haitiana fa tsy nisy na dia gazety iray na dia fahitalavitra iray aza niresaka ny fahatezeran'ny fiarahamonina.
Na izany aza, nihazona ny safidiny ihany ny komity mpikarakara ny loka. Tamin'ny antsafa tao amin'ny bilaogy MigraMundo, nanamafy ny fanapahan-keviny ny komity:
Fantatray ny vaovaon'ny raharaham-bonjy taitra, na ny fitarainana momba ny hasadaikatra amin'ny lohahevitra sy ny fiarahamonina Haitiana nolazain'ny pretra raha resaka tsikeram-bahoaka momba ny olana ara-tsosialy no lazaina dia tsy mampihena ny maha zava-dehibe ny sary . Nahita izahay fa nisy ny ezaka niarovana ny endrik'ilay olona nalaina sary, ary amin'izay fotoana izay, ny fahavoazana amin'ny sariny sy ny sarin'ny Haitiana nolazain'ny mompera Paolo dia tsy manandanja kokoa noho ny fahavoazana ateraky ny tsy fanomezan-danja na fanafoanam-baovao miresaka toe-javatra mahasahana ny firenena sy manerantany, amin'ny tsy fisian'ny toerana any amin'ny tranom-pikambanana ara-piarahamonina na an'ny fanjakana mendrika handraisana mpifindra monina
Tamin'ny antsafa tao amin'ny MigraMundo ihany, nilaza ilay mpakasary, Ronny Santos fa nahazo alalana tamin'ilay lehilahy Haitiana izy mba haka ny sary:
Tsy ahitana ilay olona mampiseho fandraràna ny sary mihitsy na mampiasa ny tanany sy ny sandriny mba haneho fa tsy te halaina sary izy. Nanohy nandro fotsiny izy, fantany fa nalaina sary izy. Taorian'izany, niala aho ary nanohy nandro ilay lehilahy Haitiana.
Nilaza ihany koa i Santos fa na dia tohina tamin'ny zava-niseho aza izy, adidiny ny maka sary.
Azoko tsara ny fihetsiky ny fikambanana ary azoko tsara ny tsikera, saingy nisy ny tsy fanajana ary tsy maintsy naka ny sary tamin'ny fomba matihanina aho.
Saingy tsy naharesy lahatra ny Missão Paz sy ny hafa nandray anjara tamin'ny fandraisana sy ny fikarakarana ny mpifindra monina ny tohan-kevitr'ilay mpakasary sy ny komity. Ankoatra ny taratasy vaovao fandavana ny sary, nanatontosa fanangonan-tsoniam-bahoaka hahazoana fanohanana sy hanoherana ny fifantenana ny sary ihany koa ny fikambanana:
Manokatra modely mampidi-doza ny fanomezan-doka sary tahaka izany izay zava-dehibe kokoa noho ny zo maha-olona an'ilay olona nalaina sary. Amin'izany hevitra izany, azo atao ny manasongadina asa sary maro hafa izay manampy amin'ny asa ara-tsosialin'ny haino aman-jery mikasika ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny mponina sy ny manampahefam-panjakana mikasika ny fifindra-monina, tsy mila manevateva na manitsakitsaka ny zon'olombelona.
Nitsikera ny famoahana ilay sary ihany koa ilay mpanao gazety Boliviana Antonio Andrade, miandraikitra ny vavahadin-tserasera Bolívia Cultural sy Planeta América Latina:
Tsy azo ampiasaina ho fitaovana hanalana baraka na tsy manome lanja ny maha-olombelona ny fahoriantsika! Tokony ho lalindalina kokoa sy tsy dia mahazatra ny toe-javatra! Amin'ny maha olon'ny haino aman-jery ahy, mino aho fa ny etika maha-matihanina dia miaraka amin'ny mpanao gazety hatrany, izay tsy maintsy manana ny lanjany mifantoka amin'ny fanajana ny maha-olona amin'ny fampitam-baovao fa tsy amin'ny fanakiviana na oviana na oviana.
Rodrigo Borges Delfim no tonian-dahatsoratra ao amin'ny bilaogy MigraMundo, voalaza ao amin'ny lahatsoratra.